पीवीसी पाइप एक्सट्रुजन मेसिन निर्माताहरू - चीन पीवीसी पाइप एक्सट्रुजन मेसिन कारखाना र आपूर्तिकर्ता
PVC फोर-पाइप एक्सट्रुजन मेसिन
कार्यसम्पादन विशेषताहरू: पछिल्लो प्रकारको चार PVC बिजुली बुशिंग उत्पादन लाइनले उच्च आउटपुट र राम्रो प्लाष्टिकाइजेशन प्रदर्शनको साथ एक जुम्ल्याहा-स्क्रू एक्स्ट्रुडर अपनाउँछ, र प्रवाह मार्ग डिजाइनको लागि अनुकूलित मोल्डसँग सुसज्जित छ। चार पाइप समान रूपमा डिस्चार्ज र बाहिर निकाल्ने गति छिटो छ;
तीन-तह पीवीसी ठोस पर्खाल पाइप को-एक्सट्रुजन मेसिन
को-एक्सट्रुडेड तीन-तह PVC पाइप लागू गर्न दुई वा बढी SJZ श्रृंखला कोनिकल ट्विन स्क्रू एक्स्ट्रुडर प्रयोग गर्नुहोस्। पाइपको स्यान्डविच तह उच्च क्याल्सियम PVC वा PVC फोम कच्चा माल हो।
1. एक्स्ट्रुडरले सुपर पहिरन-प्रतिरोधी मिश्र धातु स्क्रू ब्यारेल प्रयोग गर्दछ; ट्विन-स्क्रू समान रूपमा फिड हुन्छ र पाउडर पुल गर्दैन;
2. PVC थ्री-लेयर मोल्डको अनुकूलित डिजाइन, आन्तरिक प्रवाह च्यानल क्रोम प्लेटेड र अत्यधिक पालिश गरिएको, पहिरन र जंग प्रतिरोधी छ; विशेष साइजिंग आस्तीन संग, पाइप उत्पादन उच्च गति र राम्रो सतह छ;